KANTON’I GASIKARA: Hetsika ara-barotra manandratra ny asa tanana malagasy | Journal Madagascar
Mampisongadina ny maha malagasy. Miditra amin’ny andiany fahatelo ny « kanton’i Gasikara ». Nanomboka ny 18 desambra 2019 ary tsy hifarana raha tsy ny sabotsy 21 desambra 2019 eny amin’ny zaridainan’Antaninarenina ity tsenaben’ny asa tanana malagasy, karakarain’ny Chez’Elles ity. Nanokatra izany tamin’ny fomba ofisialy ny solontenan’ny fiadidiana ny Repoblika Andriamananoro Augustin, ny solontenan’ny faritra Analamanga ary ny tale jeneralin’ny asa tanana avy amin’ny ministeran’ny indostria, ny varotra sy ny asa tanana. Nambaran’ny tomponandraikitry ny Chez’Elles, Ratrimoson Stéphanie fa hetsika ho fanandratana ny maha malagasy sy hanomezana lalam-barotra ho an’ny mpanao asa tanana malagasy ny “kanton’i Gasikara”. Vita malagasy daholo no vokatra hampirantiana mandritra ny efatra andro, manara-penitra ny kalitao ary amin’ny endrika amam-bika isan-karazany. Anisany mampiavaka ity andiany ity ny tolotra omen’ireo mpandray anjara (mpamokatra sy mpivarotra asa tanana) ho an’ny mpitsidika.
Araka ny fanazavan’ny mpikarakara hatrany fa nosafidiana manokana ny zaridainan’Antaninarenina noho izy toerana manan-tantara. “Mino aho fa tsy kisendrasendra nisafidianana ity toerana ity. Eto ny tsangambato manamarika ny fahaleovantena”, hoy i Andriamananoro Augustin. Nohamafisin’ny solontenan’ny fiadidiana ny Repoblika fa manohana ny hetsika tahaka itony fitondram-panjakana, ny governemanta satria manandratra avo ny asa tanana malagasy, mampisongadina ny maha malagasy. Manentana ny Malagasy rehetra ny mpikarakara, hanjifa ny asa tanana malagasy mandritra “kanton’i Gasikara” mba tsy ny vahiny ihany hankafy izany. Tsy misy ny vidim-pidirana.
FOOT ACADEMY : L’initiative du groupe Filatex et le joueur international Florent Malouda